Dwayne Johnson waa Superstar filim walbo gadi karo madaama filimkiisa Rampage ganacsi wacan sameenayo – Filimside.net
Dwayne Johnson waa Superstar filim walbo gadi karo madaama filimkiisa Rampage ganacsi wacan sameenayo
April 16, 2018 Zakarie Abdi
Hollywood-ka dhawaanahan waxaa meesha ka baxday nidaamkii awooda atooraha ama (Star Power) waxayna sheekada isugu soo aroortay in filimada qarash xoogan la geliyo ayadoo aalado casri ah la adeegsanayo.
Balse Tom Cruise ayaa raggii hore kasoo horey oo weli suuqa Hollywood-ka kaligiis filim gadi karo laakiin mashaariicdiisii ugu dambeeyeen fadhiid ayay noqdeen.
Haatan Hollywood-ka waxaa qabsan rabo Dwayne Johnson (The Rock) oo aqoonsi atoorenimo helay sidoo kalena u dalacayo darajada Superstar madaama uu bilaabay inuu fariin walbo gadi karo.
The Rock filimkiisa ugu dambeeyay Rampage ayaa ganacsi wacan sameenayo wuxuuna sedexdiisa maalmood ee ugu horeesay gudaha USA Boxoffice ka keenay $34.5 million.
Waa bilaabasho wanaagsan wuxuu ka ganacsi badan tahay filimkaan Tom Cruise filimkiisii The Mummy kaasi oo sanadkii hore keenay $31.7 million sedexda maalmood ee ugu horeesay cimri ahaantiisana wuxuu keenay $80 million.
Sidoo kalena The Rock filimkiisii Hercules ee sanadii 2014 la daawaday isagana sedexda maalmood ee ugu horeesay USA wuxuu ka keenay $29.8 million cimri ahaantiisana wuxuu gaaray $72 million.
Filimka Rampage wuxuu suuqyada caalamka ka keenay $114.1 million asigoo laga daawaday 61-dal, weliba ganacsiga ugu badan China ayuu ka sameeyay asigoo ka keenay $55M mudo sedex maalmood sidoo kale suuqyada kale waa weyn lacagaha uu ka keenay waxaa ka mid ah UK ($5.7m), Korea ($5.7m), Mexico ($4.8m) and Malaysia ($3.5m).
Waxaa u harsan filimka Rampage in laga daawan doono dalalka France (2 May 2018), Germany (May 10) iyo Japan (May 18) taasi oo ganacsigiisa filimkaan sare ugu sii qaadi doonto.
The Rampage miisaaniyad adag ayuu xambaarsan yahay oo ah $120M wuxuuna mudo sedex maalmood soo xareeyay $148.6 million isku darka gudaha USA iyo daafaha caalamka.
Waxaa Aqrisay 804